Light steel villa, nke a makwaara dị ka ụlọ ihe eji eme ihe nchara, ihe bụ isi ya bụ nke a na-eji ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke aluminom ígwè site na ngwangwa teknụzụ na-acha ọkụ. Ngwongwo aluminom-zinc nke aluminium-zinc plated nchara bu 55% aluminum, ...
Development akụkọ ihe mere eme nke ìhè ígwè villa na n'ụlọ na mba ọzọ
N'oge na-adịbeghị anya, n'ahịa ụlọ wụpụrụ "ọkụ nchara villa villa", ihe ọhụụ a emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ toaa ntị. Igwe ụlọ nchara pụtara na China na 1990s. Taa, nkà na ụzụ nke ígwè Ọdịdị ụlọ bụ tozuru okè, na-akwalite mba, na o nwere o ...
Enwere ezigbo ihe kpatara eji eme ụlọ ọkụ nchara nchara ọkụ, gụnyere ụlọ na ụlọ ndị nwere ọtụtụ ụlọ na ọtụtụ ụlọ, na-etolite n'ike n'ike. E jiri ya tụnyere ụdị ụlọ ndị ọzọ e ji ígwè rụọ, ụlọ ọrụ TUOOU nke na-arụ ọrụ ọkụ, karịsịa ụlọ oyi na-acha uhie uhie ...
Ka ọnwa nke abụọ dị na Machị, Maazị Robert, onye ahịa si Ọstrelia bịakwara n’ụlọ ọrụ anyị ọzọ. Nke a bụ oge nke atọ ya ịbịa China na tuoou. Mgbe nghọta mbu nke mbu, nyocha nke abụọ na mmeri ikpeazụ n'oge a, Maazị Robert ekwusiri ike mgbe niile na ọ chọrọ ụfọdụ teknụzụ dị elu, mmadụ ...